नमुना वन कायम राख्न तल्लीन छौँ ः लोकबहादुर कार्की
By vijayafm on	 March 11, 2020 अन्तरवार्ता, कोरोना अपडेट, देश, स्थानीय, स्थानीय तह
सामुदायिक वनको संरक्षण, संवद्र्धन, दिगो उपयोग, वातावरण सन्तुलन, जैविक विविधता संरक्षण एवम् गरिबी न्यूनीकरणमा समेत पु¥याएको योगदानको कदर गर्दै वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, वन तथा भू–संरक्षण विभागले दोस्रो स्थानको गणेशमान सिंह सामुदायिक वन राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सम्मानित धुसेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक वनका रुपमा चिनिन्छ । वनले जैविक विविधता, धुसेरी सिमसार र पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन तथा संरक्षणमा महŒवपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । अतिथि गृह, होमस्टेलगायतको अवधारणामा अघि बढेको वनले अध्ययन अवलोकन थलोका रुपमा विकास गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा हामीले धुसेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष लोकबहादुर कार्कीसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, विजय खबरका लागि संवाददाता सरु चापागाईंले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
धुसेरी सामुदायिकवनले के कस्ता कार्य गर्दै आएको छ ?
अहिले हाइटेन्सनको मुनि परेर वनपैदावारबाट निस्केका काठदाउराविक्री वितरणको तयारी भइरहेको छ । अनुगमनतथामुल्याङ्कन समितिबाट सिफारिस गरिएकानामावलीविक्रीवितरणका लागिनामप्रकाशन र विक्रीवितरण गर्ने योजना रहेको छ।साथै धुसेरी सामुदायिकवनउपभोक्ता समूहले २५ वसन्तपार गरिसकेको हुनाले रजतजयन्तीकसरी मनाउनेकसरीभव्यतरिकाले सम्पन्नगर्ने भन्ने उद्देश्यले टोलसुधार समिति, आमासमूह सबै जनाको सल्लाह सुझावबमोजिमकार्यक्रम सञ्चालनगर्ने योजना रहेको छ।
स्थापनाकालदेखि हालसम्मआउँदा धुसेरी सामुदायिकवन उपभोक्ता समूहमा आएका परिवर्तनहरू केके हुन् ?
धुसेरी सामुदायिकवन उपभोक्ता समूह सानो कार्यलयबाट सञ्चालनगरिरहेको थियोे । अहिलेको समयसम्मआइपुग्दाआफ्नो भवन बनिसकेको छ । अहिले २ कठ्ठा १७ धुर जग्गापनिसामुदायिकवनले लिएको छ । सानो भवनमा दैनिककारोबार सञ्चालनगर्न असहजभएकाकारण आफ्नो पुरानो भवनविस्तार गरेर तलाथपेका छौँ । अहिले समूहमाबोर्ड बैठक बस्न हलकोठा निर्माण भएको छ ।बाहिरबाट अवलोकनगर्न आउने पाहुनाकालागिपनिकोठाहरु बनेका छन् भने कानुनी सल्लाहकारका लागिअधिवक्ता यज्ञबहादुर अधिकारीलाई नियुक्त गरेका छौँ ।उहाँकालागिपनि छुट्टै कोठा निर्माण भएको छ। उपभोक्ताहरु वन क्षेत्रमा फँडानी गर्ने उपभोक्ताहरु अहिले आफै वन संरक्षण वनव्यवस्थापनमालाग्नथाल्नुभएको छ।डढेलोको समयमाउपभोक्ताहरुमा चेतनाको स्तर वृद्धि हुनथालेको छ । उपभोक्ताहरु आफै समूह बनाएर वनमाहुनसक्ने चोरी निकासीप्रतिचनाखो हुनुभएको छ। अहिले चनाखो बन्नथाल्नुभएको छ ।
अतिथिभवननिर्माणको आवश्यकता किन देख्नुभयो ?
धुसेरी सामुदायिकवन एउटा पुरानो वन भएका कारण यहाँ घुम्न आउनेहरुको चाप अत्यधिक छ । अतिथिहरुको सम्मान र वनको अध्ययनअवलोकन र भ्रमण गर्न आउने पाहुनाहरुलाई लक्षित गरेर सहजताका लागि यो भवन बनाइएको हो तर अहिले तत्कालवनमाअवलोकन र भ्रमण गर्ने पाहुनाआउने बस्ने अवस्थाबन्न सकेको छैन । पर्यापर्यटनको वृद्धिविकाससँगै भोलिकादिनमा आन्तरिक सगै बाÞयपर्यटक आउने सम्भावना छ । हामीले आजकालागिभन्दापनिभोलिको दिनलाई मध्यनजर गरेर अतिथि गृह बनाएका छौ । अहिले दुईवटा कोठा छन् । हामीले बाहिरबाट आउने अतिथिहरुबाट पनि केही रकम लिने र आर्थिक रुपमा अगाडि बढाउने र सँगैवनकोविकासमालाग्ने लक्ष्य रहेको छ।
वनमा प्रायःअवलोकन र अनुसन्धानमा आउनेहरु के प्रयोजनका लागि आउने गरेका छन् ?
धुसेरी सामुदायिकवनमा अवलोकनगर्ने मात्रहोइनअध्ययन र अनुसन्धानगर्ने आउनेहरुको संख्यामा वृद्धि हुनथालेको छ।अध्ययन र अवलोकनगर्ने चितवनबाट तीनवटा समूहआउनुभएको थियो ।वैज्ञानिक वनमा दोस्रो वर्ष भएपनि अरु वैज्ञानिक वनभएको सामुदायिकवनभन्दाभिन्नखालेसामुदायिकवनभएको अनुसन्धानकर्ताहरुको धारणा छ ।हाम्रो सामुदायिकवनमा १६५ प्रजातिकापहिचानभएका जडीबुटी छन् । हाम्रो वनमा अनुसन्धानगर्न आउनेहरुले जडीबुटी नै रोजाइमा पर्ने गरेको छ । हामीले पनि अनुसन्धानगर्न सहजहोस् भनेर धुसेरी सामुदायिक वनलेवनमापाइने जडीबुटीका बारेमाकिताबनिकालेका छौँ। जसले गर्दा अनुसन्धानगर्न आउनेहरुका लागिसहजभएको छ। यसैकारण पनि धुसेरी सामुदायिकवनउपभोक्ता समूहअध्ययनको रोजाइमा पर्ने गरेको छ ।नासाका वैज्ञानिकहरुले जडीबुटीको डिएनए परीक्षण गर्ने र त्रिभुवनविश्वविद्यालयबाट माइगोनियाझारका विषयमाअध्ययन र अनुसन्धानगर्ने एक टोलीपनिआउनुभएको थियो ।अन्य रातो सालक र कालो सालककाविषयमापनिअध्ययनर अवलोकनगर्न आउनुहुन्छ।
प्रचार–प्रसारलाई कसरी अगाडि बढाउनुभएको छ ?
धेरै प्रचार–प्रसार त हुन सकेको छैन तर हामीले आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षणगर्न मात्रसकेका छौँ कि जस्तो लाग्छ । सामाजिक सञ्जालमावनकाविषयमा प्रचार–प्रसार गर्न थालेका छौँ । जसले गर्दा आन्तरिक पर्यटकहरुको आगमनहुनथालेको छ। प्रचार–प्रसारलाई वृद्धि गर्न सक्ने हो भने वनजङ्गलर वन्यजन्तुको अवलोकनगर्नबाÞय पर्यटकहरुकोअझै बढीआगमनहुनसक्छ। यस विषयमा हामी सचेत छौँ । सोही अनुरुप रेडियो र पत्रिकामार्फत पनि यसलाई प्रचार–प्रसार गर्न थालिएको छ ।
अन्यआम्दानीका स्रोत के हुन् ?
हाम्रो देश नेपालवनजङ्गल,खोलानाला र जडीबुटीमा धनी देश हो । हामीले पर्यटक भित्र्याउने ठूलो सम्भावना रहेको छ । पिकनिक स्पोर्ट रसिमसार क्षेत्र धेरै छ । हरेक क्षेत्रबाट आम्दानीका स्रोत जुटाउन सकिन्छ । धुसेरी सामुदायिकवनले पनिसिमसार क्षेत्र बनाउने योजनाबनाएको छ।वन क्षेत्रभन्दाबाहिर घाटगद्दी स्थलमाअतिथि गृह बनाउने योजना गरेको छ ।होमस्टेजस्तै १० वटा घर बनाउने लक्ष्य छ । १० वटा घरमा २० वटा कोठा रहनेछन् ।२० ओटा कोठामा ८० जनासम्म बस्न मिल्ने व्यवस्था रहनेछ । आन्तरिक र बाÞयपर्यटक भित्र्याउने हाम्रो उद्देश्य हो । यसले पनि राम्रै आम्दानी हुने विश्वास राखेका छौं ।
संरक्षणको पाटोमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?
धुसेरी सामुदायिकवन नमुना वन हो । यसलाई हामीले निरन्तर कायम राख्न तल्लीन छौँ । संरक्षणमा कुनै कमजोरी हुन दिएका छैनौँ । कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेका छौँ । चोरीनिकासी हुन नदिने, वृक्षरोपणलगायतका काम निरन्तर चलिरहेका छन् । हामी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा लागेका छौँ । अब सुख्खायाम लाग्दैछ । सबै उपभोक्तालाई सक्रिय गराई डढेलो लाग्न नदिन सचेत गराइरहेका छौँ । सबै उपभोक्तालाई डढेलो लाग्ने समयमाअली बढी सचेत र चनाखो रहनआग्रह गर्दछु । उपभोक्ताको साथ सहयोग र मायाका लागि हामी आभारी छौँ । भोलिका दिनमापनि सहयोगको अपेक्षा राख्दछु।